कहानी लेख्ने बनाम कर्पोरेट स्पीकको लेखन शैली
बिहीबार, सेप्टेम्बर 22, 2011 बुधबार, जुलाई 23, 2014 Douglas Karr
धेरै वर्ष पहिले म एक रोजगार प्रक्रियामा लक्षित चयन भनिन्छ। एक नयाँ उम्मेद्वारको साथ अन्तर्वार्ता प्रक्रियाको कुञ्जीमा खुला-अन्त प्रश्नहरू सोधिएको थियो जुन उम्मेदवारलाई बताउन आवश्यक थियो कथा। कारण यो थियो कि मानिसहरूलाई ईमान्दार जवाफ दिनको लागि सजिलो भयो किनकि जब तपाईं उनीहरूलाई हो वा कुनै प्रश्न सोध्नुको सट्टा सम्पूर्ण कथा वर्णन गर्न भनिन्छ।
के तपाई टाईट डेडलाइनको साथ राम्ररी काम गर्नुहुन्छ? उत्तर: हो
Storified ... के तपाई मलाई कामको समयको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईसँग धेरै कडा म्यादहरू छन् जुन बनाउन गाह्रो भएको थियो, वा हुन सक्ने असम्भव? उत्तर: एक कहानी जुन तपाईं यस बारेमा थप विवरणहरू सोध्न सक्नुहुन्छ।
कथाहरू दुबै खुलासा र हुन् यादगार। हामी मध्ये धेरैले हामीले पढेका अन्तिम प्रेस विज्ञप्तिलाई याद गर्दैनौं, तर हामीले पढेको अन्तिम कहानी हामी याद गर्दैनौं - चाहे यो व्यापारको बारेमा भए पनि। को Orabrush कथा मेरो लागि दिमागमा आएको अन्तिम अन्तिम हो।
सामग्री रणनीतिहरू अनलाइन मांग गर्दछ कि हामी मार्केटिंग र कर्पोरेट स्पोकन छोडेर कथाहरू सुनाउन सुरू गर्दछौं। यो कर्पोरेट ब्लगिंगको साथ एक प्रमुख रणनीति हो। व्यक्तिहरू तपाईंको कम्पनी, उत्पादन वा सेवाको बारेमा कर्पोरेट-कुरा सुन्न चाहँदैनन्, उनीहरू वास्तविक कथाहरू सुन्न चाहन्छन् कि कसरी तपाईंको ग्राहकहरू तपाईंसँग व्यापार गरेर राम्रो गरिरहेछन्!
यो होफम्यान एजेन्सी मा एक इन्फोग्राफिक विकसित भएको छ कथा बनाम कर्पोरेट स्पिक। तपाईं पनि लू होफम्यानको ब्लगमा कहानी कथन प्रविधिको बारेमा बढी पढ्न सक्नुहुन्छ, इश्माएलको कुना.
टैग: अक्टोडलखन्नुमोहित पार्नुहोस्आरामदायकसम्मोहककुराकानीकर्पोरेट बोल्नुहोस्ढिलोरमाइलोवीरभित्रishmaels कुनाशब्दजालjarringसांसारिककथाअवरोधबाहिरवास्तविकरोबोटबिक्रीचिल्लोचिल्लो सलिमञ्चकहानीबनावटहोफम्यान एजेन्सीशब्दहरुलेखनलेखन शैली
हामी गुगलका लागि ईन्डेन्टेड नोकरहरू हौं
सेप्टेम्बर १,, २०११ 22::2011० अपराह्न
कहानी कथनमा हाम्रो इन्फोग्राफिक हाजिर गर्न समय लिनु भएकोमा धन्यवाद।
तपाईको उदाहरण साक्षात्कार प्रक्रिया प्रयोग गरी राम्रो छ। खुला-अन्त प्रश्नहरूको साथ हाम्रो अनुभव पुष्टि हुन्छ कि सबैजनाले कथा भन्न सक्ने क्षमता छ।
अब, एकसँग कोननको ग्लिबनेस वा क्रिस रकको टोइ नहुन सक्छ, तर त्यो ठीक छ
एक कम्पनी को लागी, लक्ष्य छैन कि उनीहरु aisles मा हाँस्न छ।
लक्ष्य "जडान" हो।
तपाईं शर्त, लू!
डेभिड ओ। एंडरसन
मई 30, 2012 मा 3: 53 एएम
राम्रो पोष्ट र मजबूत पोइन्ट। कहानी कथन एक परिदृश्यको दायरामा प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्राय: कर्पोरेट यापिंग भन्दा बढी अप्ठ्यारो हुन्छ। इन्फोग्राफिक पनि मनपर्‍यो 🙂